नेप्सेमा बन्यो बुलिस मारुबोजु; अन्तिम १ घण्टामा ३ अर्बको कारोबार, के बजार एक्सट्रिम बुलमा जाँदैछ ? - सिधा मिडिया
२९ पुष २०७८, बिहीबार २०:४८ मा प्रकाशित
आज २ बजे देखि ३ बजेसम्मको अन्तिम घन्टामा नेप्से करिब २० अंकले बढ्दा करिब ३ अर्बको कारोबार भएको छ। जम्माजम्मी ६ अर्ब ६६ करोडको कारोबार हुँदै गर्दा अन्तिम १ घन्टामै ३ अर्ब हाराहारीको कारोबार हुनुले बिशेष अर्थ राख्दछ। यसले लगानीकर्ताहरुमा बजार अब बढेरै जाने भन्ने किसिमको मनोविज्ञान बलियो रुपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। बजार एक्स्ट्रिम बुल हुन लागेको हो ?
नेप्सेमा २८७० देखि २८८० को एरियामा बलियो रेसिस्टेन्स छ। आज बजार २८५७ को बिन्दुमा क्लोज हुँदै गर्दा त्यो रेसिस्टेन्स ब्रेक हुने बलियो सम्भावना देखिएको छ। यदि २८८० को बिन्दुलाई क्रस गरेर नेप्से माथि जान्छ भने नेप्सेको यात्रा ३००० हाराहारीको हुन सक्दछ। बजार बढ्ने क्रममा बढेको बढेकै हुँदैन, बीच बीचमा करेक्सन आउंदै बजार बढ्ने गर्दछ। अब आउने करेक्सन कस्तो प्रकारको हुन्छ र अर्थतन्त्र, व्याजदर, तरलता लगाएतका फ्याक्टरहरु कुन अवस्थामा रहनेछन भन्ने कुराले बजारको आगामी यात्रा कतातिरको भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। अर्थसंसारले लेखेको छ ।